မတရားတဲ့ လောကကြီးကိုမုန်းတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မတရားတဲ့ လောကကြီးကိုမုန်းတယ်
Posted by nyimalay on Feb 23, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. |9comments
ဘ၀ဆိုတာ လောကကြီးမှာ ပျော်ရွင်မှုတွေ ၀မ်းနည်းမှုတွေ ကြေကွဲမှုတွေ အားငယ်မှုတွေ တက်ကြွမှုတွေ နဲ့ ပြည့်နေတယ်လို့ လူတွေကပြောကြတယ်……… ငါ့ဘ၀မှာကတော့ဘာလို့များ ၀မ်းနည်းမှုတွေ ကြေကွဲမှုတွေ အားငယ်မှုတွေ နဲ့ပဲပြည့်နေရတာလည်း ကံကောင်းခြင်းဆိုတာတွေက ငါ့အတွက်မရှိတော့ဘူးလား……….. ဘ၀မှာသိတတ်ပါပြီဆိုကတည်းက ကြေကွဲမှု ၀မ်းနည်းမှု နာကျင်မှု တွေနဲ့ပဲကြီးပြင်းလာရတဲ့ ငါကအရင်ဘ၀ကဘယ်သူတွေကိုများဘာလုပ်မိခဲ့လို့လည်းဆိုတာ သိချင်လိုက်တာ………… လောကကြီးမှာ လူတွေဟာ ဘာလို့ ကိုယ်ချင်းစာတရားနည်းပါးကြရတာလည်း……….. လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ချင်းစာမှုဆိုတာသာရှိမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ စိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာကို လူသားတိုိင်းနားလည်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်……. အမှန်တရားဆိုတဲ့ အရာက လူတွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာသာရှိတာပါ………. တကယ်တမ်းဆိုရင် အဲ့ဒီလို အမှန်တရား အမှန်တရားလို့အော်နေတဲ့သူတွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က မတရားလုပ်ချင်နေကြတယ်ဆိုတာ ကိုလူတိုင်းကသိနေရဲ့သားနဲ့ဘာလို့ ခံစားရတဲ့သူတွေဘက်ကနေရပ်တည်မပေးနိုင်ကြရတာလည်း………. စဉ်းစားမိပါတယ် ခုခောတ် လောကကြီးမှာ မတရားလုပ်တဲ့သူတွေ အတွက်ပဲ နေရာရှိတာလားဆိုတာကို………. ၀ဋ်ဆိုတာလည်တတ်တယ်တဲ့ ငယ်ငယ်က လူကြီးတွေကဆုံးမတယ်…………. အဲ့ဒီဝဋ်ဆိုတာက ဘယ်တော့ဘယ်အချိန်မှာ လည်တာလည်း လည်မှာလည်း………. ဘ၀တွေမှာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုတွေ ကြောင့် လူသားတွေမျက်ရည်တွေကျကြရတယ်…………. မျက်ရည်တွေ ဟာ ငိုစရာမရှိရလောက်အောင် ကို ခြောက်သွေ့နေတဲ့သူတွေလည်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ…………….. လောကကြီးကမတရားဘူး…………….. မတရားလုပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုမုန်းတယ်…………. မုန်းတယ်…………
ဒီဘ၀ မဟုတ်ရင်တောင် နောက်ဘ၀ ကျတော့လည်မှာပဲလေ
ဒီဘ၀မှာ မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီး ချမ်းသာကျော်ဇောနေကြတဲ့လူတွေကတော့
ဒီဘ၀မှာ ကောင်းတာတွေလုပ်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာလဲ
အရင်ဘ၀က ပြုခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကြောင့်ပဲလေ
မတရားတိုင်းသာ မုန်းရမယ်ဆိုရင် ချစ်စရာ ကိုကျန်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး
အော်ဦးနီရယ် ချစ်စရာမကျန်လဲဘယ်သူ့မှမချစ်ဘူး…………… မုန်းတယ်ဆိုတာက အခုလောလောဆယ်မတရားလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုမုန်းတာ …………… ဒါတွေက Personal တွေပါ မည်သူ့ကိုမျှမရည်ရွယ်ပါ……… ခုလက်ရှိ company မှာမြင်တွေ့နေရတာတွေကို မကျေနပ်လို့ တင်လိုက်တဲ့ပိုစ့်ပါ……………
စာဖတ်တာ ၀ါသနာပါတယ်။ စာလည်းရေးချင်ပါတယ်။ စာစရေးဖို့ ကြိုးစား တာပါ။ says:
နေရာတိုင်းမှာ ဖြစ်နေတာပါ။ စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့။ လက်ရှိမှာ ဖြစ်နေတာတွေက နောင်တချိန်မှာ ပြန်သတိရတဲ့အခါ တွေးပြီး ရယ်ရယုံထက်မပိုပါဘူး။ တခါတလေ ကိုယ်မပြုပဲ ကိုယ့်ကပြုတယ်ဆိုပြီး ပြသနာတက်ရတဲ့ အခါသတ်သေချင် လောက်တဲ့အထိ ခံစားခဲ့ရတာတွေလည်း ကြာလာတော့ ရီစရာ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အားတင်းထားပါ။
မုန်းရမယ်ဆိုလျှင် အပေါ်က တယောက်ပြောသလိုပဲ ကျန်မှာကိုမဟုတ်ဘူး ။
ဒီလိုပါပဲ လူ့ဘ၀မှာ တွေ့ဆုံ ကြုံနေကြရတာတွေ မုန်းစရာချည်းပဲ … ဒါပေမဲ့လည်း အဆင်ပြေအောင် နေရတာပေါ့
မနက်ကမမက ကျေနပ်တဲ့ ပို့စ် … အခုက ပေးဆေးကွိက မုန်းတဲ့ ပို့ စ်..
မတရားတာကို မုန်းနေလို့မရဘူး ပေးဆေးကွိရေ… ။ မတရားဘူးထင်ရင် တရားအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ နည်းလမ်းရှာရတယ် … ။ အီးတုံးတို့ဆို မတရားဘူး ထင်ရင် ဒဲ့လိုက်ရှင်းတာ … ။ မတရားတဲ့ပုံစံကြီးနဲ့တော့ အလုပ်ဘယ်လုပ်ချင်ပါ့မလဲ .. တစ်ခါလောက်ကြမ်းလိုက် …နောက်ပိုင်း ၀ပ်သွားလိမ့်မယ် … ကွေးကွေးကို ဒါမျိုး လာမလုပ်နဲ့ ပွဲကြမ်းသွားမယ် ဘာမှတ်လဲ ဘာညာနဲ့ ဖိုင်တွေဘာတွေ ဆွဲလွှတ်ပစ်လိုက် … ။ စားပွဲကို လက်သီးနဲ့ ထု စားပွဲပေါ်က ဟာတွေ ဆွဲဆုတ်ပစ်(အရေးမကြီးတဲ့ စာရွက်တွေကိုပြောတာ ) … လုပ်ကြည့်ပါ … ။
အလုပ်သစ်တစ်ခုလည်း ကြိုရှာထားပေါ့ ..
မတရားတာတွေ သိသိကြီးနဲ့ ခံနေရတာ အညွှန့်တောင် ကျိုးသွားလို့ ပြန်တောင် နလန် မထူနိုင်ဘူး။ မတရားတဲ့ အကြောင်းတော့ တွေးနေရင် အသက်တိုသွားလိမ့်မယ်။ ပြန်ကြမ်းဖို့ အရင်က စိတ်ကူးရှိလို့ ကြမ်းတာဘဲ အားမတန်လို့ မာန်လျော့နေရတဲ့ အချိန်မှာတော့ အဆင်ပြေသလို သိုသိုသိပ်သိပ် နေတာ အကောင်းဆုံးဘဲ မြင်မိတယ်။
ကိုယ်တွေ့ ဘ၀ တစိတ်တပိုင်းနဲ့ ခြုံပြီး ပြောတာပါ။
ကွေးလေးရေ- အချိန်ဟာ အကောင်းဆုံး သမားတော်ပါ။ အချိန်ကြာသွားရင် အခု အရမ်းမခံနိုင်အောင် ဖြစ်နေတာတွေက ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်သွားလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲ အမှတ်မရှိတာလား မသိဘူး။ ကိုယ့်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်သူက မတရားလုပ်ခဲ့လဲ၊ နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်ခဲ့လဲ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သူများကို လုပ်ခဲ့ရင်လည်း မမှတ်မိဘူး။ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ မကြာခဏ စကားများလိုက် ပြန်တဲ့လိုက်နဲ့။ ကျောင်းပြီးလို့ ဝေးသွားတဲ့အခါကျမှ သူတို့နဲ့ ဘယ်လောက်ခင်ခဲ့ရလဲ၊ ပျော်ခဲ့ရလဲဆိုတာတွေ တွေးပြီး ခုလို ဝေးသွားမှ လွမ်းနေရတယ်။